बर्डहाउस नीरस जीवनशैली र प्रकृतिसँग दिगो अन्तरक्रियाको अभावका कारण, एक व्यक्ति निरन्तर बिगार्ने र आन्तरिक असंतोषको स्थितिमा बस्छ, जसले उसलाई पूर्ण जीवनको आनन्द लिन सक्दैन। यो धारणाको सीमा विस्तार गरेर र मानव-प्रकृति अन्तर्क्रियाको नयाँ अनुभव प्राप्त गरेर यसलाई ठीक गर्न सकिन्छ। किन चरा? तिनीहरूको गाउनेले मानव मानसिक स्वास्थ्यलाई सकारात्मक असर पार्छ, चराहरूले पनि किरालाई कीटबाट वातावरणलाई जोगाउँछ। परियोजना डोमिक Ptashki सहयोगी छिमेक सिर्जना गर्न र पक्षीहरु को अवलोकन र हेरचाह गरेर पक्षीविज्ञानी भूमिका को प्रयास गर्न को लागी अवसर हो।
घरपालुवा देखभाल रोबोट
घरपालुवा देखभाल रोबोट डिजाइनरको उद्देश्य कुकुरलाई हुर्काउने समस्या १ व्यक्ति ब्यक्तिहरूको समाधान गर्ने थियो। क्यानाइन जनावरहरूको चिन्ता विकार र शारीरिक समस्याहरू हेरचाहकर्ताको अनुपस्थितिको लामो अवधिमा जडित छन्। तिनीहरूको सानो बसोबास स्थानको कारण, देखभालकर्ताहरूले साथी जनावरहरूसँग बासस्थान वातावरण साझा गरे जसले सेनेटरी समस्याहरू निम्त्यायो। दुखाइ पोइन्टबाट प्रेरित, डिजाइनर एक केयर रोबोटको साथ आए जुन १. खेल्छ र साथी जनावरहरूसँग टसिंग व्यवहार गर्दछ, २. इनडोर क्रियाकलाप पछि डस्ट र क्रम्ब्स सफा गर्दछ, र companion. गन्ध र कपालमा लिन्छ जब साथी जनावरहरूले लिन्छन् आराम
बिचको फर्नीचर मोड्युल
बिचको फर्नीचर मोड्युल यदि तपाईंसँग बिरालो छ भने, तपाईंलाई सम्भवत यस तीन समस्याहरू मध्ये कम्तिमा पनि दुई समस्याहरू छन्: उनको लागि घर छनौट गर्दा: सौंदर्यशास्त्र, स्थिरता र सान्त्वनाको अभाव। तर यस लटकन मोड्युलले यी समस्याहरूको समाधान गर्दछ तीन कारकहरू संयोजन गरेर: १) न्यूनतम डिजाइन: फारमको सरलता र रंग डिजाइनको परिवर्तनशीलता; २) पर्यावरणमैत्री: काठको फोहोर (काठको भुँडी, हजामती) बिरालो र उनको मालिकको स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित छ; )) विश्वव्यापीता: मोड्युलहरू एक अर्कासँग मिल्दछन्, तपाईंलाई तपाईंको घर भित्र छुट्टै बिराला अपार्टमेन्ट सिर्जना गर्न अनुमति दिदै।
बर्डहाउस घरपालुवा देखभाल रोबोट बिचको फर्नीचर मोड्युल कुकुर कलर कुकुर कलर महको साथ दालचीनी रोल